Ngaphandle kokubhalisa imihlathi yabo, kunesidingo esithile sabathengi bezinyosi ukuhlinzeka ngezinsizakalo zokuvundisa izitshalo zokudla. Umcwaningi wezolimo we-Agricultural Research (ARC) uMike Allsopp uncoma lokhu okulandelayo: Imikhombandlela yokulandela impova yabanikazi bezinyosi enikeza ngezinsizakalo zokuvota:
Amakholomu asetshenziselwa ukuvota impova kumele abe yinkosikazi-ilungelo (abe nenkosikazi emhlathini).
Ama-hives kufanele abe nama-8 ama-frod ozimele ezimbozwe izinyosi kanye nama-4 brood ozimele ne-brood ngezigaba ezahlukene.
Amakholomu kufanele afakwe emaqenjini, mhlawumbe enza umbuthano ukuze unciphise ukukhuphuka. Isayithi elilodwa kumele lingabi ngaphezu kwamamitha angu-400 ukusuka olandelayo. Uma lokhu kungenakwenziwa, kufanele kubekwe eceleni komkhawulo wezithelo noma insimu. Lapho amakholoni afakwa emgqeni kungcono ukuzithuthukisa ngangokunokwenzeka bese uvula yonke indawo yesibili ingene 180 °.
Ama-Hives kufanele abekwe ezindaweni eziphansi ezifana nezitini zokugcina umhlabathi umswakama. Ezindaweni ezinezinyosi zezinyosi zibabeka okungenani ama-1 m phezulu, amakholomu kumele avikeleke nakubuthongo.
Uma kunesithombo sezinyosi ezikhuphisanayo noma esiseduze nensimu yezithelo (i-eucalyptus, i-citrus, i-lucerne, i-acacias njll) ukwandisa inani lamakholoni.
Qinisekisa ukuthi amanzi amasha aseduze nonyaka. Kubalulekile ukulondoloza umswakama odingekayo nokushisa emcimbini wokukhulisa izingane.
Kuzo izitshalo eziningi, amakoloni angathunyelwa ensimini noma ensimini ngenkathi i-10% yazo zonke izimbali isivele ivuliwe.
Ukuvota impova kungase kube nzima futhi kudinga ucwaningo nolwazi. Izinhlangano zomlimi wezinyosi zendawo zingase zizuze ngokwezincomo nosizo.
Ukuvotela Kwezilimo Zokudla
Honeybee pollinating onion flowers.
ENingizimu Afrika, ucwaningo lwe-pollen luqhutshwa yi-ARC, eye yanikeza izincomo ezilandelayo zokuvundiswa kwezitshalo zokudla:
Etshalwe ikakhulu eNtshonalanga Kapa, ​​lezi zimbali zomuthi womuthi izinsuku ezingu-21. Faka ama-hives 5/8 uma izihlahla zingama-50% embali. Izimbali zama-alimondi zamukeleka kakhulu ngosuku lwesibili oluvulekile.
Etshalwe ikakhulu eNtshonalanga Kapa, ​​imifino ngayinye yama-apula izinsuku ezinhlanu kuya kwezingu-25. Ukuze uthole impova emihle yezihlahla ze-apula, ama-2 - 5 ama-hive / ha anconywa. Ukutholakala komuthi omuhle ngezinyosi kutholakala uma izinyosi ezintathu noma ngaphezulu ngomuthi nganoma isiphi isikhathi sosuku zibalwa.
Ama-avovoc akusiwo umoya-impova, ngakho-ke kudinga ukudluliswa okusebenzayo kwe-pollen yizinambuzane lapho izinyosi ezihamba phambili zihamba khona. Kutholakale ukuthi izinyosi zingahle zikhishwe yizinyosi ezinokuncintisana ezifana nezitshalo ezimnyama, izimila ze-saligna eziphuzile (uhlobo lomuthi we-eucalyptus) kanye nokuqala kwezimbali ze-citrus.
Ukuvuthwa kwe-avocade okuphumelelayo kudinga imifucu emibili kuya kwezingu-4 / ha kanye nezinyosi ezinhlanu (ezibalwe phakathi kuka-10: 00 no-16: 00) ngehora elilodwa lemitha yesihlahla esivundile.
Njengoba ukukhula okukhulu kwe-blueberry plantings eNingizimu Afrika kulindeleke kusukela ngo-2018 kuya ku-2023, izinsizakalo zokuvotela izinhlanzi ezihlaza okwesibhakabhaka zizoba nesidingo esikhulu. Ukuhlwanyela kuthiwa kukhula kusuka ku-1 500 ha kuya ku-6 000 ha. Ama-blueberries flower isikhathi eside ngakho-ke umqondo omuhle ukuletha izinyosi ezinhle njalo emavikini amabili kuya kwangu-3. Beka amakoloni angu-10 -14.
I-canola isetshenziselwa kakhulu amafutha (eNingizimu-eNtshonalanga Kapa) nangesilinganiso esincane sokukhiqiza imbewu (iFree State neNyakatho Kapa). Ikhwalithi kanye nenani lembewu landa kakhulu nge-honey bee pollination. Izimbali ze-canola amaviki angu-5 kuya kwangu-7.
Kunconywa ama-hives amabili / ama-ha. Uju kufanele lukhishwe ngokushesha ngangokunokwenzeka ngoba uju lwe-canola lukhazimula ngokushesha esikhanini.
Izihlahla ze-Litchi zitshalwe ezindaweni ezingaphansi komhlaba zaseNingizimu Afrika nezimbali kuze kube yizinsuku ezingu-21. Ukuvotela ngezinyosi kubalulekile ukuba isithelo se-lichi sibekwe futhi ama-2 - 4 ama-hives asethwe ngaphakathi kwensimu yezithelo. Amandla e-Colony akhula ngenkathi yokuvota impova kanti izibungu zingase zivikeleke kakhulu - indawo yesikhumba esivela kubasebenzi bezithelo zezithelo.
Ama-Macadamia yizimboni ezitshala ngokushesha ezitshalweni zomuthi eNingizimu Afrika ngakho-ke izindaba ezinhle kubafuyi bezinyosi abafuna ukuhlinzeka ngezinsizakalo zokulondoloza impova kumafama ase-macadamia nut. Imbali yama-Macadamias isikhathi eside, ngakho-ke ngokuvamile umqondo omuhle ukuletha amaza amasha wezinyosi, mhlawumbe njalo amasonto amabili. Indawo 5 - 8 isifuba / ha.
Isitshalo esibalulekile sama-subtropical eNingizimu Afrika, imithi yemithi yemango izinsuku ezingu-28. Izincomo zokuvuna impova yi-3 - 15 isidleke / ha. Izikhwepha zeColony ziyancipha ngesikhathi sokuvuthwa kwemango, ngakho-ke izibhamu eziqinile neziphilile ziyadingeka.
Ukuze u-anyanisi ukhiqize imbewu, i-pollination yizinyosi iyadingeka. Kunconywa ama-hives amahlanu kuya ku-12. Nge-anyanisi, izinyosi zingase zizwele kumapirate wezinyosi (ngokuvamile atholakala ezindaweni ezinesihlabathi) nokuqukethwe kwe-potassium ku-anyanisi empe.
Etshalwe eNtshonalanga Kapa, ​​izihlahla zemifula zihluma phakathi kwezinsuku ezingu-8 kuya kwezingu-14, kodwa imbali yamukela izinsuku ezingu-1 kuya kwezingu-2. Kunconywa ukuthi ama-2 - 6 ama-hives / ha asetshenziswe futhi ama-hives ashukunyiswa uma izitshalo zifakwe nge-pesticides.